India : Taranaka Indizena Mihafongana ao Kerala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2013 15:59 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, বাংলা, Deutsch, Español, English
Kavita,Vao herintaona sy tapany monja, maty noho ny tsy fanjarian-tsakafo herinandro lasa izay, ankoatra ny antotanisa mampahonena amin'ny fahafatesan'ireo ankizy ao amin'ny foko Attappady, foko monina manodidina ny faritr'i Kerala, India ahitana mponina indizena maro dia maro.
Hatramin'ny fanombohan'ny taona 2013, efa 35 ny zanaky ny foko matin'ny tsy fanjarian-tsakafo tao Attappady. Maro ny gazety lehibe manerana ny firenena sy ireo haino aman-jery hafa nitatitra ity loza mahazo ireto ampaha-mponina anisan'ny mora andaira-pahavoazana indrindra ao India ity.
Mila kianina ny fahasalamana tsizarizary noho ny tsy fisian'ny toera-pitsaboana ao Attappady indrindra fa ireo vehivavy bevohoka, reny sy ny zaza, izay mitarika ny fahafatesan-jaza, hoy ny tatitry ny UNICEF.
Antony hafa mahatonga ity toe-javatra maharikoriko ity ihany koa ny tsy fahatongavan-tsaina ara-pandrosoana amin'ny fanimbana ny ala, ny fanesorana ireo vazimba teratany amin'ny faritra efa nahazatra azy sy ahazoany aina. Nitarika fanadihadiana momba ity tranga ity ny Dr. P K Sasidharan, Filohan'ny Departemantam-Pahasalamana Kolejy Medikaly ao Kozhikode, izay nilaza fa ny fandringanana ny ala (rohy pdf), ny fitomboan'ny fiaraha-monim-panjifana sy ny tsy fisian'ny fanentanana no tena antony nanimba ny fahasalamana tao Attappady.
Fanehoana an-tsary ny fahafatesan'ny zaza. Avy amin'i Noushad
Rajendra Prasad, tonian'ny gazety-boky Gothrabhumi, gazety-boky miompana amin'ny resaka ara-poko, nilaza tao amin'ny Gazety Haindò fa raha mitohy izao maodelim-pivoarana izao, dia hihena isa haingana be mihitsy eo amin'ny taranaka roa na telo eo ny Attappady. Ny fikambanam-behivavy mpiray foko ao Attappady, ‘Thai Kula Sangham’ dia milaza fa mihoatra lavitra noho ny lazain'ny governemanta ny tena isan'ny ankizy maty noho ny tsy fanjarian-tsakafo.
Sivaram naka sary tao Atapady. Nahazona alalana mampiasa azy.Photo by Sivaram V in Attappady. Used with permission
Na dia ny 50 isan-jato ny ankizy latsaky ny telo taona any India aza no tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo raha jerena ny antontanisan'ny UNICEF, dia mahalana izany tantaran'ankizy tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo izany ao amin'ny faritr'i Kerala noho ny fananany maodelim-pandrosona sy ny tobim-pahasalamana maro ao amin'ny fanjakana. Ny fanjakana [ao] no iray amin'ny taha-ambany indrindra amin'ny isan'ny zaza maty eo amin'ny firenena, izay tsy mena-mitaha amin'ny an'ny firenena mandroso: ny salanisa ankapoben'ny zaza maty any India dia 44 amin'ny 1000, fa ny ireharehan'i Kerala dia ny fananany salanisa ambany hatramin'ny 16 amin'ny 1000. Izany no manaitra ny maro any Kerala raha misy ny voina tahaka izany noho ny tsy firaharahian'ny governemanta mifandimby amin'ny ankapobeny.
Mbola manampy trotraka ihany koa ny ataon'ny minisitra maro amin'izao fotoana avy amin'ny Mandatehezana Demokratika Miray, tarihin'ny Antokon'ny Kongresy ao India, amin'ny famoahana fanambarana manafintohina mibedy ny reny ho mpidoroka toaka sy ny ankizy ho tsy mihinana araka ny tokony ho izy. Nahatonga fifandirana ny tenin'ny Minisitry ny kolontsaina K C Joseph nilaza fa ny fisotroana toaka “arrack” ataon'ireo reny mitondra vohoka no isany antony lehibe mahatonga fahafatesan-jaza any amin'ny faritra adivasi manodidina an'i Attappady.
Nitsipaka marindrano izany fihanaky ny fisotroan-taoka izany i Prabhu Das, Lehiben'ny fitsaboana tao amin'ny fiadidiam-panjakan'i Kottathara teo aloha tao amin'ny Hopitaly manokana hitsaboana ireo avy amin'ny foko sady lefitry ny manampahefana ara-pahasalamana ao amin'ny distrikan'i Palakkad amin'izao fotoana izao, izay namoaka zaza mahatratra 3000 ihany koa tao amin'ny ankohonan'ny foko tao Attappady nihoatra ny 15 taona lasa izay, fa tsy mba nahita reny na iray aza izy ka nisotro zava-pisotro misy alikaola.
Sarin'i Sivaram V tao Attappady. Nahazoana alalana.
Na dia miezaka mampiranty ny zava-misy aza ireo mpitati-baovao sy haino aman-jery maro, dia manohy ny fomba mamohehatra hatrany ny governemanta. Nampitroatra ireo mpiray tanindrazana tao amin'ny tambajotra zany.
tUskEr kOmbAns, blaogera iray sy mpiondana Google Plus, nanoratra mikasika ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ao Attappady:
52 ny ankizy maty nandritra izay heritaona sy tapany lasa izay. Noho ny tsy fahampian'ny mpitsabo, dia voatery mandeha any amin'ireo hopitalin'ny Kolejim-Pitsaboana ao Kozhikode ny hotsaboina. Nefa noho ny fitohanan'ny fifamoivozana, maro ny marary maty an-dalana. Iray monja no mpitsabo spesialista ao amin'ny faritra Attappady, izay mpitsabo misahana ny vohoky ny vehivavy. Maro amin'ireo mponina mahantra voretra monina amin'iny faritra iny no manovo rano eo amin'ny reniranon'i Bavani izay tena maloto tokoa. Eny fa na ny hopitaly aza dia mahazo io rano io koa. Tsy nisy nataon'ny governemanta hanatsarana izany toe-draharaha izany
Sreekanth Nair, izay mpampiasa ny Google Plus koa, dia menatra noho ny zava-misy ary mandrabiraby ilay mpilatron'i Kerala ankalazaina indrindra:
Matoky aho fa tsy hisy tsoa-kevitra ny ady hevitra. Mihevitra ny miara-mijoro amin'ny firenena mandroso isika nefa ankehitriny dia misy zaza 36 maty noho ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika. Anarivony ireo mpitsabo eto amin'ny fiadidiam-paritra nefa tsy misy mba misy iray miasa ao amin'ny faritra Attappady. An-tapitrisa ny ropia indiana no lany amin'ny programam-pampandrosoana amin'ilay Kerala mihamisongadina fa misy hanoanana mitsilotsilo any amin'ny ankohonana samihafa any? Menatra ny tenako aho ary na ireo zaza velona ary moa toa tsy misy vidiny amin'ity fiadidiam-paritra ity.
Kunjaali Kk namaly bontana tamin'ny lahatsoratra mitovitovy aminy, izay nalahelo mafy amin'ny krizy ao Attappady:
Mbola misy maro hafa koa, efa ho in-50 avo heny mihitsy, no maty amin'ny fomba na loza samihafa nandritra ny taona, izay tena mbola ratsy lavitra noho ny ao Attappady. Misy ireo marary maty noho ny tandrevaka tao amin'ny hopitaly,misy koa ireo mafia manomo olona noho ny antoka nanaovana findramam-bola. Nahoana moa no tsy misy na iray aza mahatsiaro ho tohina manoloana izao fahafatesana izao? Tsy misy fahafatesana tsara na ratsy kokoa noho ny an'ny hafa. Moa ve tsy andraikitry ny governemanta izany rehetra izany? Noho izany, mba hahazoana fitia, mila ranomasom-boay ho an'ireo olon'ny foko sy ny Attappady izahay. Na dia maro aza ny zavatra hafa mitranga, dia ity ihany no lohahevitra tian'ny rehetra vazovazoina.
Manahy ny maoralin'ny olona i Ramachandran Vettikkat ka nanoratra:
Ny hany mba teny nandrenesana ny minisitra dia fanamasohana ireo ankizy tao Attapady izay mihoatra noho ny fanalam-baraka ankapobeny an'i Kerala. Nefa ny mponiny dia miahy momba ny sarangany, fiainany andavanandro, finoany ary ny antoko politikany monja.Tsy misy miraharaha izany resaka foko izany.
Sajith N, izay mpiantoka trano, mba mametram-panotaniana mampieritreritra ny rehetra:
Kerala no lohany eo fandroson'ny olona .. nefa dia sakana ho azy ny tsy fahampin-tsakafo sy ny fahafatesana. http://t.co/k9lTfhK2nm
Lohalaharana eo amin'ny fivelaran'ny mahaolona ao India i Kerala .. saingy mbola mitoetra ho sakana ho an'ny foko ny tsy fahampia-tsakafo sy ny fahafatesana
Mpanao gazety Biju Govind nilaza ny fihetsiky ny governemanta:
Nifandimby ny kongresy & CPM nitondra an'i Kerala nampiasa ny foko mahantra ireo na ny tao Atapady na ny tao Vanianady.
Nanararaotra nanambaka ireo foko mahantra na Attappady izany na Wayanad ny fitondrana mifandimby tao Kerala notarihan'ny Antokon'ny Kongresy sy ny CPM mbamin'ireo mpiara-dia aminy avy
Mila fandrosoana sy foto-drafitrasa ny firenena. Kanefa raha manadino ny ny fandrosoana ara-tsosialy kely indrindra mitodika any amin'ny reny sy ny zaza, ary manaisotra ny ankamaroan'ny mponina indizena, dia ahoana no hanonerany izao taranaka very izao?